ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ အရမ်းပင်ပန်းနေတာ ပုံမှန်ပဲလား ......... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 07/03/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိပ်ရေးလည်း မဝဘူး။ ဘယ်လောက် အိပ်အိပ် ခေါင်းကြည်တယ်လို့ကို မခံစားရဘူး။ အိပ်ရေးမဝတော့ နေရတာလည်း ပင်ပန်းတယ်။ စိတ်လက်လည်း မကြည်ဘူး။ ဒီလို ပင်ပန်းနေတကို ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲဆိုပြီး အပြင်းအထန် အဖြေရှာ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲ လစဉ် တစ်ခေါက် အလည်ရောက်လာတတ်တဲ့ period time က ရောက်လာပြီလေ။ အဲ့တော့မှ သိလိုက်တာက ဒါကြောင့် စိတ်လက်မကြည်ဘဲ ပင်ပန်းနေတာနေမယ်ပေါ့။ ဒါဆို ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ အရမ်းပင်ပန်းနေတာ ပုံမှန်ပဲ လား ………
ဒါက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမှ ဖြစ်တာလား။ အခြားသူတွေရော ဖြစ်လား။ ပုံမှန်ပဲလား ဆိုတာကို သိချင်နေတဲ့ လေဒီလေးတွေ ရှိလား။ ဒါဆိုရင် ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
လေဒီ အများစုရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းက ပင်ပန်းမှု မကင်းပါဘူး။
အမျိုးသမီး အများစုဟာ နေ့ရက်တိုင်းမှာ မိသားစု တာဝန်၊ ကျောင်းတက်ရတာ၊ အိမ်အလုပ်တွေ၊ ရုံးအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း အချိန်နဲ့ အလုပ်ပြည့်နေတတ်ကြတာပါ။ တစ်နေ့တာမှာ တာဝန်ယူထားသမျှ အလုပ်တွေကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ဆောင်ရတာက အင်အား အတော်လေး ကုန်ခမ်းစေပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ပင်ပန်းမှုကို ခံစားရတယ် ဆိုပေမယ့် ရာသီလာတဲ့ရက် နီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်းမှာ ဟော်မုန်း ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ပင်ပန်းမှုကို ပိုမို ခံစားလာရပါတယ်။
ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ အရမ်းပင်ပန်းနေတာ ပုံမှန်ပဲ လား ………
နေ့တိုင်း တာဝန်တွေ ဝတ္တရားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လေဒီလေးတွေအဖို့ နေ့ရက်တိုင်းက ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့် ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ ကိုယ်တွင်းက ဟော်မုန်း ပြောင်းလဲတာတွေကြောင့် နေထိုင် စားသောက်မှု၊ အိပ်စက်မှု ပုံစံတွေပြောင်းလဲတာကြောင့်လည်း အရင်ရက်တွေထက် ပိုပင်ပန်းမှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရာသီမလာခင်ရက်တွေနဲ့ ရာသီလာတဲ့ရက်တွေမှာ ပင်ပန်းတာကို လေဒီလေးတွေတိုင်းလိုလို ခံစားကြရပြီး ဒါက ပုံမှန် အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဘာတွေကြောင့် ပင်ပန်းရတာလဲ …….
ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာ ပင်ပန်းမှုကို ခံစားရစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက
ဟော်မုန်း အတက်အကျ ဖြစ်မှုကြောင့်
ရာသီ မလာခင်ရက်တွေမှာ Oestrogen ဟော်မုန်း ပမာဏ ကျဆင်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အားမရှိသလို ခံစားရတာပါ။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ serotonin ဟော်မုန်း ပမာဏလည်း ကျဆင်းသွားတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှု မကောင်းတာမျိုး ခံစားရတာပါ။
သားဥကြွေတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်က မြင့်တက်လာပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အင်အားတွေကို ပိုမို အသုံးပြုရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ထက် period time မှာ အားအင်တွေ ပိုမိုကုန်ခမ်းတယ်လို့ ခံစားရတာပါ။
Period Time မှာ သွေး အများကြီးဆင်းမယ်ဆိုရင် သွေးဆုံးရှုံးမှု များတာကြောင့် သွေးနီဥဆဲလ်တွေထဲမှာ သံဓာတ် အားနည်းတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ဆဲလ်တွေ၊ တစ်ရှူးတွေဆီကို လုံလောက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိအောင် မပို့ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ဆဲလ်တွေက လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပိုပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Period time မှာ နာကျင်မှုတွေ၊ ဆာလောင်မှုတွေ နဲ့ ကောင်းကောင်း မအိပ်ထားရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ လေပွသလို ခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေတွေက လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဖြစ်အောင် ဟန့်တားနေသလို ပုံမှန် ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပါ ပျောက်ဆုံး စေပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်လည်း ပုံမှန်ထက် ပိုပင်ပန်းနေတာပါ။
ရာသီလာခါနီးတဲ့အခါ အချိုတွေ စားချင်တာ၊ ကဖင်းများတဲ့ ချောကလက်၊ လက်ဖက်၊ လက်ဖက်ရည် စတာတွေကို အာသာငမ်းငမ်းစားချင်တာမျိုးတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီဖို့ ခက်ခဲစေပြီး ပိုပင်ပန်းစေတာပါ လေဒီတို့ရေ …….
Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) ကြောင့်
ရာသီလာခါနီးမှာ ခံစားရတဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းမှုကို ခံစားရတာပါ။
ရာသီမလာခင်ရက်တွေမှာာ အရမ်းပင်ပန်းနေတာ ပုံမှန်ပဲ ဆိုပေမယ့် ဒီအခြေအနေတွေကို လတိုင်း ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာ ပြကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Why Are You Tired Before Your Period? Causes and Remedies https://www.always.co.uk/en-gb/tips-and-advice-for-women/pms-and-menstrual-cramps/why-are-you-tired-before-period/ Accessed Date5October 2021
This is why you’re always extra tired during your period https://www.cosmopolitan.com/uk/body/a13113921/why-am-i-tired-during-period/ Accessed Date5October 2021
သက်သာတာကိုမှ ကြိုက်တဲ့ လေဒီတို့အတွက် ရာသီဘောင်းဘီ